आफ्ना ट्वीटर फलोअर्सलाई पैसा बाँड्दै जापानी व्यापारी « Lokpath
आफ्ना ट्वीटर फलोअर्सलाई पैसा बाँड्दै जापानी व्यापारी
काठमाडौं । सोसल मिडियामा कसैलाई फलो गर्नु सामान्य कुरा हो । तर कोहि मानिसलाई सोसल मिडियामा तपाँईले फलो गर्दा पैसा पाइन्छ भने तपाँईलाई कस्तो लाग्ला ? पक्कै पनि तपाँईले फालो अवस्य नै गर्नु हुन्छ होला ।
जापानका एक अरबपति युशाकु मीजावाले उनको ट्विटर अकाउण्टमा फलो गरेका मानिसहरुलाई १० अर्ब २४ लाख नेपाली रुपैयाँ बाँड्ने घोषणा गरेका छन् । यो रकम मीजावाले न्यु-इयर २०२० को अवसरमा आफ्नो ट्विटमा रिट्विट गर्नेहरुमा बाँड्ने भएका छन् ।
मीजावा आफ्नो यो कदमलाई सामाजिक प्रयोगको कदम मानेका छन् । साथै उनले पैसाको खुसियालीले मानिसलाई कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जान्नु रहेको बताएका छन् ।
यिनै फलोअर्सहरुमध्ये उनी एक हजार जनालाई छान्ने छन् । उनको पैसाको असर मानिसहरुमा कस्तो पर्छ भन्नेबारे उनले एक सर्वे गरेर पत्ता लगाउने बताएका छन् । बिजनेस म्यान मीजावाको ट्विटरमा अहिले ७ लाख १२ हजार फलोअर्स रहेका छन् ।
४३ वर्षीय मीजावा एक फेसन कम्पनीका मालिक हुन् । उनको निजी सम्पत्ति २ अर्ब डलर रहेको छ । उनले आफ्नो यो तरिकालाई विशेषज्ञ एवम अर्थशास्त्रीहरुले चासो दिने बताएका छन् ।
मीजावासँग पैसा पनि धेरै रहेको र बाँड्नको लागि समय पनि रहेको छ । अन्य मानिसलाई प्रभावित पार्न मीजावाले यो अनौठो तरिका अपनाएको कतिपयको बुझाई रहेको छ । एजेन्सी ।
प्रकाशित मिति: २०७६,पुष,२७,आईतवार १४:५७
प्रेमिकालाई मध्यरातमा भेट्न गएका युवकको भयो यस्तो दुर्दशा !
काठमाडौं । लकडाउका कारण प्रेमीम्रेमीकासँग भेट्न पनि बन्द जस्तै भएको छ । जसकारण लकडाउन खुलेपछि एक प्रेमी आफ्नी प्रेमीकालाई भेट्न
नक्कली परेला लगाउँदा आँखाको ज्योति गुमाईन् यी युवतीले !
काठमाडौं । अधिकांश महिलालाई सजिएर बस्न मन पर्छ । सुन्दर देखिनको लागि महिलाहरु आफ्नो घरमै पनि तयार हुन्छन् र ब्यूटी
काठमाडौं । जागिर हरेकको फरक फरक नै हुन्छ । जागिर खाँदा थोरै मोज मस्ती, थोरै आराम, केहि फुर्सद भएमा जागिर
यी बालक जो माकुराको जसरी भित्तामा चढ्छन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । तपाईले हलिउड फिल्म स्पाइडर म्यान त हेर्नु नै भएको होला । जसमा एक युवक भित्तामा, ढोकामा सेकेण्डमै चढ्दछन्
कोरोनाबाट एकै घरका तीन दाजुभाइको मृत्यु
दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
थप १४ सांसदसहित ६५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि